Soo dejisan 360 Total Security Essential – Windows – Vessoft
WindowsAmnigaAntiviruses360 Total Security Essential
Bogga rasmiga ah: 360 Total Security Essential
360 Wadarta Guud ee Badbaadada – antivirus oo loogu talagalay ilaalinta kombiyuutarka aasaasiga ah ee ka dhan ah khayaanada iyo khatarta internetka. Software wuxuu isticmaalaa mashiinno badan oo antivirus ah iyo farsamada casriga ee caqliga ah si loo ogaado feylka cudurka qaba iyo khataraha aan la garaneyn ama qarsoon. 360 Total Security Essential waxay taageertaa noocyada kala duwan ee nidaamyada loogu talagalay faylasha laga shakiyo, kuwaas oo lagu sii falanqeyn karo si looga fogaado dhibaatooyinka amniga. Software wuxuu ku siinayaa difaac internetka ah isaga oo xiraya website-yada khatarta ah iyo samaynta iibsiyada internetka oo ammaan ah. 360 Total Security Essential wuxuu leeyahay sanduuq sanduuq oo kuu oggolaanaya inaad furto faylasha ama aad ku codsatid codsiyada jawi gooni ah iyadoon khatarta ah u waxyeeleynin nidaamka muhiimka ah. Antivirus sidoo kale waxay isticmaashaa falanqaynta habdhaqanka si looga hortago infekshanka nidaamka iyo ilaalinta macluumaadka shakhsiyeed ee ka dhanka ah ransomware.
Mashiinnada dheeraadka ah ee antivirus
Ilaalinta nidaamka faylka iyo diiwaanka
Soo dejisan 360 Total Security Essential
Faallo ku saabsan 360 Total Security Essential
360 Total Security Essential Xirfadaha la xiriira